Toyota Myanmar Aye & Sons Home The Pioneer of Automobile industry
Contact us : 95 (1) 540740 - 95 (1) 400950 Ext: 111
Toyota ကားချစ်သူများအတွက် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနဲ့ထပ်မံ ပုံဖော်ထားသော Toyota Hiace 2019 model ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ*** Toyota Hiace 2019 model ကို auto နှင့် manual ဂီယာ၂မျိုးဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး diesel (1GD-FTV)engine အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Engine power
Toyota Aye and Sons မှ ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Brand New Model Innova ဒီဇိုင်းကာလာက အရောင်၆မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်လို့ လူအများကြားမှာ ထင်ရှားနေမှာပါ။ 2.0- liter ဓာတ်ဆီကားဖြစ်ပြီး ခုံတန်း ၃တန်းနဲ့ လူဦးရေ၈ယောက် တင်ဆန့်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုအတွက် လေအိတ်
Toyota Aye and Sons Roadshow ကို လာမယ့် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် ကား ချက်ချင်းဝယ်၊ချက်ချင်းရမယ့် အစီအစဉ်… အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်နေ့နဲ့ (၂၁)ရက်နေ့ မြန်မာပလာဇာမှာ ကျင်းပမယ့် Roadshow လေးမှာဆိုရင် Innova ကားအပြင် Fortuner ၊ Avanza နဲ့ Vios ကားမော်ဒယ်များပါ
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတယ့် TOYOTA SUV ကားအသစ်ကြီး Rush ကို အခုလာမယ့် ဇွန်လ 29/30 နှင့် ဇွန်လိုင် 1 ရက်နေ့ တွင် Myanmar Plaza ရှိ Promotion Area မှာမိတ်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် Hire Purchase/
No. 87(A), Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Shwegondine, P.O 11201.
Tel : (01) 540 740, (01) 400 950 Ext: 111
Opening Hour : 9:00 AM – 5:00 PM (Mon – Sun)
Close : Public Hoildays
Body & Paint Center- Hlaing Thar Yar
No.85, Corner of Min Ayar St & Than Lwin St, Shwe Than Lwin Industrial Zone.
Hlaing Thayar, Yangon, Myanmar.
Tel: (09) 30063630, (09) 450062995
The new version designed, developed & introduced by “Michael AN Thein” Supported by NJK & TT (TTAS Marketing) • Toyota Aye & Sons “Pioneer of Automotive industry" - powered by Enfold WordPress Theme